Maraqa soy waxaa la sameeyay muddo lix bilood ah - Soy Sauce-NANTONG CHITSURU FOODS CO., LTD.
Maraqa soy ayaa dhalaalay lix bilood
Waqtiga: 2017-12-13 Hits: 98
Samuel Wells Williams, cilmiga Sinologist, wuxuu ku qoray 1848 in soyga ugu wanaagsan ee uu u dhadhamiyey Shiinaha “ay ahayd iyadoo la kariyo digirta jilicsan, oo lagu daro tiro isku mid ah oo sarreen ah ama shaciir ah, isla markaana u oggolaanaya tirada dadka inay siiso; qayb cusbo ah iyo saddex jeer inbadan oo biyo ah ayaa markaa kadib la gelinayaa, xarunta oo dhammuna waxay hadhay laba ama saddex bilood ”.
Digirta soy waa la qooyay oo la kariyey, laguna qasaayaa fungus Aspergillius oryzae, waxaana looga tagay brine illaa ay ka daayaan xididdada soy, iyagoo dhalaya dareere madow.
Marxaladda xigta waa cadaadiska. Sida saliidda oo kale, saxaafadda ugu horreysa waxaa loo tixgeliyaa inay bixiso dhadhanka ugu fiican, uguna yar. Soy lightka la soo saaray ayaa khafiif ah waxaana loo isticmaalaa in lagu shubo oo la dhameeyo. Waa alaabta aad sushi ku hesho. Dhaqan ahaan waxaa jiray saxaafad labaad oo ka sii dhumuc weyn, taas oo mararka qaar wali la arko, in kasta oo cadaadisyada hawo-mareenka ay si weyn uga biyo diideen maalmahan, iyaga oo xoqaya wax kasta oo haray ka dib saxaafadda ugu horreysay dheriga guud ee milixda madow.
In la noqdo labadaba wax tar leh oo la kala saari karo waa iskudhaf naadir ah - laakiin maraqa soy ayaa maamusha. Waa dhadhansiin, hubanti, laakiin kaliya maahan in milix la siiyo, laakiin sidoo kale waxay leedahay umami hodan ku ah, dabeecadda kufiican Platinum-ka ee cunnooyinka ugu fiican Aasiya. Markay dhalo ku garaacso gadaasha tallaajadda, cuntooyinkaaga - iyo jasiiradda lamadegaankaaga ah - weligood caajis ma noqon doonaan.
Hore: Maraqa Soy ee la kariyay iyo Sauce Soy isku qasan